Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Norvezy » Raha tsy afaka mandeha any Norvezy ianao dia mitondra anao any Norvezy ny PBS
Vaovao Mafana Norvezy • Kolontsaina • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Mandehandeha any Norvezy
Androany, 17 Mey, dia fetim-pirenena lehibe any Norvezy. Mety hisy hiteny fa mitovy amin'ny fahefatry ny volana Jolay any Etazonia izy io.
Satria tsy afaka mandeha any Norvezy izahay noho ny fameperana areti-mifindra, PBS dia nitondra an'i Norvezy taty aminay.
Ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra Atlantic Crossing dia mitantara ny taona nanjakan'ny Alemanina nazia an'i Norvezy, ary nandositra nankany Angletera sy Etazonia ny fianakavian'ny mpanjaka.
Ny mozika amin'ity andiany ity dia tsara tarehy miaraka amin'i Raymond Enoksen, teratany norvezianina, nanoratra isa.
Ny 17 Mey dia fankalazana ny lalàm-panorenana norveziana, izay natao sonia tany Eidsvoll tamin'ny 17 Mey 1814. Ny lalàm-panorenana dia nanambara fa firenena mahaleo tena i Norvezy. Tamin'izany fotoana izany, i Norvezy dia tao amin'ny firaisana tamin'i Suède - taorian'ny firaisana 400 taona tamin'i Danemark. Tsy toa an'i Etazonia, ny fetim-pirenenan'izy ireo dia tsy mifanandrify amin'ny "fahaterahan'i" Norvezy, satria fanjakana i Norvezy efa ho 1,000 taona talohan'ny 1814. I Harald I "Haarfagri" no Mpanjaka voalohany tany Norvezy, satro-boninahitra tamin'ny taona 872, ary ra razako mivantana izy. Nandritra izay 1,149 XNUMX taona lasa izay, dia nampidirin'ireo firenena samihafa i Norvezy, toa an'i Suède, Danemarka ary Alemanina nazia.
Koa satria tsy afaka mandeha any Norvezy izahay noho ny fameperana valanaretina pesta, nitondra an'i Norvezy teto amintsika ny PBS. Ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra Atlantika Crossing dia mitantara ny taona nitondran'ny Nazia Alemana an'i Norvezy, ary nandositra nankany Angletera sy Etazonia ny fianakavian'ny mpanjaka. Ny fibodoana nandritra ny Ady lehibe II dia nanomboka tamin'ny 9 aprily 1940 ary naharitra dimy taona. Nandritra io fotoana io dia niaina niaraka tamin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy George VI, Mpanjakan'ny Fanjakana Mitambatra, ny Mpanjaka Haakan VII sy ny Zanak'andriana Crown Olav. Ny printsy Märtha avy any Suède, vadin'ny Printsy Olav any Norvezy, dia nipetraka tany Amerika, niaraka tamin'i Franklin D. Roosevelt, talohan'ny nahitany ny tranony DC.
Tiako ny mihaino ny tarehin-tsoratra ao amin'ny andian-tsarimihetsika PBS. Ny Mpanjaka Haakan VII dia miteny Danoa amin'ny seho, ny printsy Crown Olav dia miteny endrika norveziana taloha, ary ny Printsesa Märtha dia miteny Suède 70 isan-jato, ary 30 isanjato ny fampifanarahana feo norveziana, miaraka amin'ny teny mahazatra ho an'ny norvezianina ihany koa.
Mahafinaritra ny mozika ao amin'ilay andiany. Raymond Enoksen, teratany norvezianina, dia nanoratra ny isa azon'ny Atlantic Crossing.
Hoy izy tamiko: "Avy amina fianakaviana mozika iray aho dia nanomboka nihira tamin'ny zavamaneno sy zavamaneno isan-karazany, saingy raiki-pitia tamin'ny piano aho ary indrindra ny synthesizer tamin'ny faha-9 taonako, rehefa nanomboka ny fiofanana ofisialiko voalohany aho, rehefa avy nivezivezy irery nanomboka tamin'ny taona 5. Raha vao nahalala namaky mozika tamin'ny faha-9 taonako aho dia nanomboka nanoratra azy. Hitondra ny zavatra noforoniko manokana ho an'ny lesoko aho. Nahazo ny lokan'ny talenta tanora niaraka tamin'ny Trondheim Symphonic Orchestra aho tamin'ny taona 2005 ary nanangana tetikasa 20 nahazo loka. Atlantika Crossing dia notendrena ho mozika tsara indrindra amin'ny andiany Cannes tamin'ny taona 2020. Ity isa ho an'ny Atlantika Crossing ity dia mampihetsi-po sy mitana ny lohahevitra kokoa noho ny fomba Skandinavianina antonony. Ny naotiko ho an'i Thale (voafantina ofisialy tamin'ny fetiben'ny sarimihetsika tany Toronto tamin'ny 2011) dia tamin'ny endrika Skandinavianina ihany. Ny isa ho an'ny Atlantika Crossing dia mampifangaro ny fiteny orkestra lehibe misy ny lohahevitra taloha (amerikana) amin'ny fampiasana ny fomba Skandinavianina feo sy piano kokoa. Izaho dia voaofana am-pahaizana amin'ny fomba eoropeana taorian'ny ady, ary izany dia lavitra ny hatsarana iarahako miasa ankehitriny. Ny fifanakalozan-kevitra 'tokony hijanonana sa tokony handeha' eo amin'i Prince Prince Olav sy ny Mpanjaka no seho sarotra indrindra isaina noho ny fiovana kely sy ny fientanam-po. ”